सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बाबुको घोषणा ! – Dainiki Online
20/04/2021 20/04/2021 admin1 Comment on सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !
विवाहका लागि राष्ट्रियताको सीमा जरुरी नभएको उनले बताएका छन्। छोराहरू भएपनि विवाहपछि सबै सम्पत्ति ज्वाँइलाई दिने उनले बताएका छन्। साथै व्यापार पनि सम्हालनु पर्ने छ। मिररको रिर्पोट अनुसार उनी छोरीको विवाह नभएका कारण तनाबमा छन् र यस्तो फैसला गरेका
1 thought on “सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !”
Kisan Karki says:
I’am ready for marriage according to your requirement